Kalịnda Pirelli 2020 Na-aga n'ihu Ihe Ngosipụta Na-ekpughere - RayHaber
HomeỤWAEurope39 ItalyKalịnda Pirelli nke 2020 Pụtaralli Ekpughere na mbụ
Kalịnda Pirelli nke 2020 Pụtaralli Ekpughere na mbụ
03 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 39 Italy, Europe, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara 0
Kalịnda Pirelli n'azụ Mpaghara maka oge izizi pụtara
Ihe osise Kalịnda Xire nke Pirelli nke Oge mbu Ihe ngosi nke ihe ngosi nke 2020 nke akụkọ Pirelli na kalenda a na-atụ anya ya nke ọma, onye foto Italy Paolo Roversi kwadebere. Roversi kwuru, X m ka na-achọ Juliet m, aga m akpọ ndụ m niile. N'ihi na Juliet kwuru okwu banyere nrọ.
N'afọ a, n'azụ ihe nkiri 47 Pirelli Kalịnda, nke onye na-ese Italiantali Paolo Roversi mere na Paris na Verona, wepụtara na nke mbụ.
Onye ama ama ama ama ama ama ama Italy Paolo Roversi, onye nyere mmetụta nke oge kwụsịtụrụ na ọrụ ya, were isiokwu bụ Ar Ar na-achọ Juliet X maka Kalịnda 2020. Ihe onyonyo nke eserese a, nke gụnyere ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-agụ egwú si n'ọdịbendị na mba dị iche iche, butere ụzọ site na njikọ nke Shakespearean ejije na ịhụnanya, ike, ndị ntorobịa na ịma mma nke heroine hiwere.
9 kpọrọ aha ama ama maka ọrụ Juliet
Roversi họọrọ onye 9 ka ọ kọwaara Juliet ọrụ. Ndị a gụnyere ndị na-eme ihe nkiri Britain bụ Claire Foy, Mia Goth na Emma Watson, ndị na-eme ihe nkiri America Indya Moore, Yara Shahidi na Kristen Stewart, onye ọbụ abụ China bụ Chris Lee, onye ọbụ abụ Spanish Rosalia na Franco-Italian omenka Stella Roversi. Roversi, onye gbara na Paris na Verona otu izu na Mee, kwuru, sị: “Ana m achọ Juliet m, m ga-akpọkwa ndụ m niile. N'ihi na, Juliet bụ nrọ ”
Foto nke nwa amaala si na ndi nwuru anwu si na ndi nwuru anwu si n'atu ugboaala ebe o dara 11 / 09 / 2015 Ịda n'àkwà ụgbọ ala nke nwa amaala si na ndị nwụrụ anwụ bilie: mgbe ọ na-agba mbọ ịnya ụgbọ okporo ígwè na district nke Izmir ma laghachi na igwe nche nke onye na-ele anya na nwa amaala si na ndị nwụrụ anwụ apụta na igwefoto nche. Oge Ikpeazụ, İZBAN (İzmir Suburban System) Çiğli Ata Sanayi n'ihi na ọ dịghị onye nche nchebe n'elu ikpo okwu n'onwe ya mgbe ọ na-agbalị ịbanye n'ime ọdịiche dị n'agbata ugbo ala Salih Pelit President nke ndị isi na-ahụ maka ndị ìsì, n'agbanyeghị mkpa maka enyemaka na ụgbọ okporo ígwè na-atụgharị ụgbọelu. Pelit na-etinye onwe ya n'elu ikpo okwu n'enweghị ịhapụ ikpo okwu IZBAN Pelit, si na ndị nwụrụ anwụ bilie n'oge ikpeazụ. Ihe mbụ nke Criminal First Instance nke Karşıyaka 5
Egwu nke Metrobus Mberede na Bakırköy kpughere (Video) 19 / 10 / 2015 Ihe osise nke ihe mberede Metrobus dị egwu na Bakırköy pụtara: Jeep na-ebelata ihe mgbochi ahụ, jikọtara ya na metrobus. Ihe oyiyi nke mmeri jọgburu onwe ya bụ nke dị ihe dịka ọnwa 1 pụtara ọhụrụ. Ihe osise nke ihe mberede Metrobus dị egwu na Bakirkoy E gosipụtara Bakirkoy İncirli mpaghara nke jeeps na-abanye n'ime ihe mgbochi ahụ, metrobus banyere ụzọ iji zukọta na metrobus. Ndị 1 dị arọ 5 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. 20 wepụtara SHOW News site na foto foto nchebe nke ihe mberede ahụ mere na September. E gosipụtara oge egwu na igwefoto metrobus na sekọnd.
Foto nke egwu na Bursaray pụtara (Video) 12 / 04 / 2016 Foto nke egwu ahụ na Bursa pụtapụtara: oge ​​ebe a na-eji ụgbọ elu na-abanye na Bursa stop na kamera. 16 V 3118 plate bus driver adịghị ama na Bursa, na ụtụtụ 05.00 na Osmangazi Bursaray ọdụ kụrụ nkwụsị. Ụgbọala ahụ nwere ike ịkwụsị site na-akụtu ndị na-emechi windo na ụlọ ndozi nke ụlọ ọrụ ahụ. Emechi nke ọdụ ụgbọ ahụ na oge ahụ na enweghị onye ọ bụla gbochiri ọdachi. N'aka nke ọzọ, ihe mberede ọdachi ahụ na-edepụta oge ụfọdụ site na ese foto nchekwa nke ọrụ. Mgbe ihe mberede ahụ, nke kpatara nbibi akụnụba, e weghaara ọdụ ụgbọ oloko ahụ ma banyeghachi ụzọ nkịtị.
Foto nke agha na metrobüste air conditioner pụtara (Video) 24 / 10 / 2016 Metrobus na agụba footage pụta nke ihu igwe agha: na Metrobus nwetara ikpeazụ ọnwa, mma ọgụ oyiyi pụtara-atụle n'ihi na nke ntụ oyi nke Metrobus ọkwọ ụgbọ ala na Metrobus mgbe na-eto eto arụmụka na njem adụ dị ka o gosipụtara oyiyi igwefoto na Metrobus ebe ahụ merenụ oge pụta. Ihe omume mere na Zincirlikuyu Metrobus kwụsịrị na 6 na Septemba. N'ụbọchị Zincirlikuyu-Avcılar njem metrobus na-eche na igwefoto nchebe mbụ, onye ọkwọ ụgbọala na-emeghe ikuku oyi gosipụtara onye ọkwọ ụgbọala ahụ. A hụrụ na e nwere ndị njem ndị ọzọ na-ekere òkè na arụmụka nke malitere n'ebe ahụ. N'ihi arụmụka ahụ nke dịgidere rue nkwụsị ikpeazụ nke Metrobus, ndị njem si na metrobus ahụ gbadata. Mgbe mkparịta ụka ahụ na onye ọkwọ ụgbọ ala, ndị njem ahụ
Foto nke YHT Accident na Ankara kpughere 14 / 12 / 2018 Awara Yenimahalle nke Ankara, Ụgbọ okporo ígwè dị elu (YHT) nke na-ejikwa ụgbọ okporo ígwè na-eduzi ya n'ihi nkwekọrịta nke 3U machinist 9 gburu, mmadụ 92 merụrụ ahụ n'ụgbọ okporo ígwè abụọ ahụ. Ogige ụgbọ okporo ígwè Konya dị elu na Ankara, 06.30'da awa iji mee ka ụgbọ okporo ígwè ahụ na-apụ ụnyaahụ, ọdụ ụgbọ okporo ígwè 06.36'da Yenimahalle Marshaland na-ejikọ ụgbọelu na-aga n'ihu. Eserese igwefoto nchedo na-egosi na ọkụ na-ebili n'ihi nkwekọrịta na nkwụsịtụ na ọdụ ahụ daba na ụgbọ oloko ahụ. Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transport and Infrastructure, kwuru na nkwupụta, "nyocha nke ikpe na nhazi na-aga n'ihu.
Foto nke 1915 Çanakkale Bridge na-akpa maka oge mbụ 17 / 02 / 2017 1915 Canakkale Bridge oyiyi na-na-akọrọ nke mbụ: 1915 Canakkale Bridge e bipụtara na nke mbụ visual oyiyi nke Çanakkale TRT News 1915 Bridge TRT News e bipụtara na nke mbụ. Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Ahmet Arslan, TRT News na Sports Department onyeisi oche Yasar Iju Mmiri ahụ ndị ọbịa nke Aries. Project OYIYI MBỤ nnwekọrịta Transport, Maritime Affairs na Communications Minister Ahmet Arslan, ga-kasị ibu n'ụwa akwa 1915 Canakkale Bridge mara ọkwa na a omume telivishọn gara na nke mbụ anya. Ya mere, a na-akọrọ ntọala nke nnukwu ọrụ nke 18 March Sea Victory na ụbọchị ncheta nke ihe oyiyi ahụ na ọha na eze nke mbụ. AKWỤKWỌ NKE EN
Akuko eziomume nke TCDD kpughere 22 / 06 / 2019 Sakarya Arifiye, Istanbul-Ankara tere ụgbọ okporo ígwè na-apụ site na machinist anya gbochiri ọdachi. A malitere ịkọwa nkọwa banyere ihe ahụ merenụ. Dị ka akụkọ TCDD si kwuo, a chọpụtara na e mehiere okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ahụ, bụ nke a chọpụtara na ọ bụrụ na a kwụchapụrụ ya ọlaedo, na-aga n'ihu na 19 na-egosi nkọwa ụgbọelu nke High Speed ​​Train (YHT) kwụsịrị n'ihi oké mmiri ozuzo na June. Istanbul-Ankara njem n'etiti Arifiye-Bilecik YHT n'ihi ala nke na-adịghị arụ ọrụ ruo ọtụtụ awa. Dị ka akụkọ Uğur Şahin si kwuo; "A na-akwụsị ụgbọ okporo ígwè si na Söğütlüçeşme gaa Ankara na Arifiye n'ihi oké mmiri ozuzo. A gwara ndị na-aga n'ụgbọ okporo ígwè na e mechiri okporo ụzọ n'ihi oké mmiri ozuzo.
Ihe Mega Transport Projects maka 2020 nke Istanbul nke bụ onye na-akwado maka 2020 Olympic 19 / 02 / 2012 MARMARAY: 2013 ga-arụ ọrụ na njedebe nke afọ, a ga-ejikọkwa n'akụkụ abụọ ahụ n'okpuru Bosphorus. Njikọ ụzọ ụgbọ oloko nke mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ ga-enyekwa aka dị mkpa maka ngwọta nke nsogbu okporo ụzọ Istanbul. Ọrụ a ga-enye njem n'etiti akụkụ abụọ nke nde mmadụ 1.5 na Istanbul kwa ụbọchị. EKWỤKWỌ ECHICHE ECHICHE: Ebumnuche nke ọrụ ahụ, nke a na-atụ anya na a ga-etinye ya n'ọrụ na 2015, tọrọ. Obere ụgbọala na obere osisi ga-eji eriri tube nke ga-ejikọta n'akụkụ abụọ nke Istanbul n'okpuru oké osimiri. Ogwe ngwọta, nke e wuru n'ebe ndịda nke ụzọ abụọ ahụ, ga-ebu ụgbọala otu puku 90 kwa ụbọchị. MGBA NA NKWA NA MARMARA KWESỊRỊ: Ụlọ ọrụ ahụ a ga-ahazi n'April mejupụtara akụkụ abụọ ....
Foto nke ụzọ ụgbọ oloko pụtara 21 / 07 / 2015 Ihe osise nke ụzọ ụgbọ oloko pụtapụtara: Foto ọhụrụ pụtara na ụzọ ụgbọ oloko Taksim na ndị ọrụ na-esiteghị na Istanbul kaadị, na-azọrọ na ndị ọrụ nchekwa ahụ agbatịwo égbè. Ihe oyiyi ahụ gosiri na a na-egbu ndị nche nche. Ihe merenụ mere n'oge na-adịbeghị anya na Taksim Metro. Dị ka ozi natara, otu ndị ọrụ bịara Taksim ka ha rie oriri. Ndị ọrụ na-achọ ịbanye Taksim Metro maka nlọghachi mgbe njem ahụ gasịrị, kwuru na ha chọrọ ka ha gbanwee na-enweghị ịpị Istanbulkart. Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị ọrụ na ndị ọrụ nche na-arụ ụka ma lụọ ọgụ. Oge ndị a gosipụtara na igwefoto nche. Onye nche 4, onye na-ezughị oke n'ihu ìgwè mmadụ ahụ, bụ na mberede na ìgwè mmadụ ahụ. Igba ...
BTK ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị mgbe a na-emepụta usoro ọhụrụ nke opportunism 18 / 11 / 2014 BTK cessation nke n'azụ Mpaghara, a ọhụrụ opportunistic usoro nke mmepụta: Ụfọdụ ngo na-achọ nnọọ elu na-akwụ ụgwọ maka egwu ala na-ejuputa n'akụkụ ụfọdụ nke azụmahịa iwere dị ka a dum, ngo viaduct, mgbe ngalaba nke mmiri na-ewu bidding na nnọọ ala ọnụ ọgụgụ. Onye nkwekọrịta nke na-adọta ego maka egwu ala ma jupụta na-ebipụ. ASRIN na-akpọ ngo Aims ịtụte mbụk Silk Road na Baku-Tbilisi-Kars Railway ịkwụsị omume nke opportunism Turkey ngalaba n'azụ a ọhụrụ usoro nke mmepụta. Usoro a, nke akụkọ Ụlọọrụ Akaụntụ na-akọwa, a na-akpọ 'goose-fill'. N'ihi ya, ụfọdụ ndị ọrụ ngo nwetara dịka Buna dum
Kalịnda 2020 Pirelli
Newkpụrụ Ọhụụ na Sistemụ Riga Obodo Ga-amanye Obodo
Medlog Logistics mere ụgbọ oloko mbụ rute na DP World Yarımca Port
Foto nke nwa amaala si na ndi nwuru anwu si na ndi nwuru anwu si n'atu ugboaala ebe o dara
Egwu nke Metrobus Mberede na Bakırköy kpughere (Video)
Foto nke egwu na Bursaray pụtara (Video)
Foto nke agha na metrobüste air conditioner pụtara (Video)
Foto nke YHT Accident na Ankara kpughere
Foto nke 1915 Çanakkale Bridge na-akpa maka oge mbụ
Akuko eziomume nke TCDD kpughere
Ihe Mega Transport Projects maka 2020 nke Istanbul nke bụ onye na-akwado maka 2020 Olympic
Foto nke ụzọ ụgbọ oloko pụtara
BTK ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị mgbe a na-emepụta usoro ọhụrụ nke opportunism